Isebenzisa i-GNU / Linux boot nge-E4rat | Kusuka kuLinux
Izolo umngani ungitshele ngakho E4rat (I-Ext4 - Ukunciphisa Izikhathi Zokufinyelela) iqoqo lamathuluzi okusheshisa inqubo yokuqalisa yesistimu yethu futhi namuhla, nginqume ukuyizama.
Ngisesha ngithole ku- I-Linux isifundo sokufakwa kwayo kanye nencazelo yokusebenza kwayo. Ngicaphuna lapha izwi nezwi:
Ungathola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhlelo lwakho luba nzima ngokwengeziwe futhi kuthatha isikhathi eside ukulayisha i-OS yakho.Lokhu kuyinto ejwayelekile kuzo zonke izinhlelo futhi imbangela enkulu imvamisa ukuseshwa nokulayishwa kwamafayela adingekayo ekuqaleni, ngoba isistimu imvamisa kufanele iskene yonke idiski ukuyithola. Ukugwema lokhu nokwandisa i- ibhuthini, kunamathuluzi afana ne-e4rat.
I-E4rat (i-Ext4 - Yehlisa Ukufinyelela Izikhathi) iqoqo lamathuluzi okusheshisa inqubo yokuqalisa, kanye nezinhlelo zokusebenza ezilayishayo ekuqaleni, ukubhalisa amafayela asetshenziswe kumizuzu yokuqala emibili yokuqalisa, ukuwahambisa kabusha nokuwalayisha kabusha, ngaleyo ndlela kususwe izikhathi ukusesha nokubambezeleka kokubambezeleka. Lokhu kuholela ezingeni eliphakeme lokudlulisa i-hard drive.
Inqubo iqukethe izinyathelo ezintathu: ukuqoqa ulwazi mayelana nokuqalisa, ukwabela amafayela kabusha, bese uwafaka ukuthi alayishe kuwo wonke amabhuthi.
Sizoqala ngokulanda uhlelo kusuka ekhasini lakhoKulokhu ngizolanda ifayela le-.deb, ngoba ngizobe ngisebenzisa Ubuntu 11.04.
Ngaphambi kokuyifaka, kufanele sisuse i-ureadahead, ukuze ingangqubuzani:
Qaphela: Ngaphambi kokuhlanzwa, kukhona ama-hyphens amabili.
Manje sengizokuchazela kalula ngangokunokwenzeka ukuthi ungayenza kanjani isebenze. Okokuqala, kufanele sihlele eyethu i-grub noma i-grub2 njengoba kungaba njalo:
Y siyengeza okulandelayo ekugcineni komugqa:
Qaphela: Isinyathelo esedlule singenza ngokufana ngqo kusukela ekuqaleni, lapho isikrini se-grub siphuma, sisemgqeni we-OS yethu bese ucindezela 'eukuyihlela. Uma kwenzeka unamasistimu amaningana afakiwe kudiski, kulula ukwenza njalo, ngoba sigwema ukuzibandakanya nokuqala kwezinye.
Uma lokhu sekwenziwe, siyavala i- umhleli Ctrl + X, bese siqala kabusha ikhompyutha yethu.
Impendulo kufanele ibe ukuqala.logUma ingakukhombisi lutho, kuzofanela uziphinde lezi zinyathelo.
Manje sibuyela ukuhlela i-grub, kulokhu sikwenza kusuka kusikrini sasekhaya ngokucindezela e, njengoba ngichaza ngenhla. Futhi sengeza ekugcineni komugqa kusuka ngaphambili single, njengokulandelayo:
Siyavala bese siqala kabusha, kepha kulokhu sikwenza ngemodi ephephile noma kusuka kulayini we imiyalo. Ngena ngemvume ngegama lethu lomsebenzisi nephasiwedi bese wenza:
Ukuze uhlelo luhlale luqala ekuqaleni futhi luhlala noma ngabe sibuyekeza, sihlela i-grub yethu,
futhi sibheke i- umugqa:
Sengeza umugqa olandelayo ngaphambili kuthule kuthule,
Futhi sesivele sinayo, kusukela manje izinhlelo ezidingekayo zizolayishwa ngokushesha okukhulu.
Ngeminye imininingwane, ungavakashela ikhasi labo sourceforge.
Esikhathini esithile ngizozama futhi uma ngingabuyi, kuzobe kungenxa yokuthi i-hard drive yami izobe isifile 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Isebenzisa i-GNU / Linux boot nge-E4rat
Kuyasebenza f ** king !!! Uyabona ukuthi izinhlelo zokusebenza zivula ngokushesha 😀
Kuhle, ngizozama ku-LMDE ... ngizokutshela ukuthi kuhamba kanjani.
Ngokufanayo, uma ngingabuyi ngokushesha, ngizobuya ngokuhamba kwesikhathi hehe.
Ngemuva kwemizamo eminingana, cha, ayisebenzanga.
Ngizozama futhi kodwa ngolunye usuku.
Kungisebenzele, neKZKGGaara, ngaphambi kokuphonsa phansi i-Archlinux yakhe nayo hahahaha
OMG! kwenzekeni kuyo? o_0
Ehem! ngiyaphinda ngibhala ngivela emsebenzini! ^ _ ^ U
Ungakholelwa ukuthi ngiye «ohlangothini olumnyama» !!! hehehe
Ngokuvamile, namuhla i-KZKGGaara ivele nge-Windows 7 efakiwe 😀
Kusebenza njengentelezi! Izinhlelo ziqala ngokushesha okukhulu! Ngiyabonga kakhulu ngezeluleko! 😀
Ngithole ukuthi kunesinyathelo esingeqiwa:
ukuvalwa kwe-sudo-r manje ## LOKUQALA kabusha KUNINGI
Yebo, ngizamile nje, futhi iqiniso ukuthi ushintsho alulukhulu: /, nokuthi angikaze ngifomathe cishe unyaka.
Angel de la vega kusho
Sawubona ntambama, ngilandele izinyathelo eziya encwadini kodwa ayisebenzi, ngisho nefayela le-startup.log alakhiwanga futhi uhlole izinhlelo eziqala futhi i-e4rat ayiqali, ngine-Ubuntu 13.04, iqiniso selivele lingihlanyisa okuthile ... ngingaluthokozela usizo lwakho
Phendula u-Angel De La Vega
Kuhle kakhulu lesi sinyathelo kusuka ekuqaleni ngeminithi eli-1 imizuzwana engama-40 kuye kumasekhondi angama-29 ngqo !!!!!!!!!! Ngiyabonga kakhulu yize bengachazi nakancane kodwa ukuzama ngikwazile ukubonga
I-Choqok 1.2 ikhishwe [Izithombe + Imininingwane + Landa]